Sina Maty mandatsaka mpanamboatra jiro am-bolo vita amin'ny alim-bary | P&Q
Samsung 5630 nitarika> 95lm / w
maty manary aluminium + fotsy PC diffuser
Fampiasana misy: Sensor, Emergency
Fametrahana Na Torolàlana momba ny fivoriambe
Azafady mba vakio tsara ireto torolàlana momba ny fametrahana ireto alohan'ny hametrahana na hitazomana izany
Fitaovana. Ireto torolalana ireto sy ny lalàna mifehy eo an-toerana (raha azo ampiharina), avy amin'ny elektrisianina iray nahazo alalana sy nahazo alalana.
Zava-dehibe - Ny vokatra dia tsy maintsy tazonina ary ampiasaina mifanaraka amin'ny torolàlana momba ny fanamboarana, ny tsy fanaovana izany dia mety hanimba ny vokatra sy ny serivisy. Soso-kevitra mafy ny hampita an'ity naoty manan-danja ity amin'ny tompony na amin'ny mpikirakira ny fametrahana azy amin'ny fotoana anaovana ny asa fivelomana. Ny fampiharana tsara dia tsy mamporisika ny fampiasana vokatra 24/7 raha tsy misy fampiharana ny elanelan'ny tsingerina mety. P & q Tsy tompon'andraikitra amin'ny vokatra tsy voatazona mifanaraka amin'ny
Ireo lamina aroso. Ny vokatra rehetra dia tokony diovina tsara amin'ny fototra tsy tapaka hijerena ny fahombiazan'ny optique, miaraka amin'ny fahamendrehana elektrika, mekanika ary firafitra araka ny namboarina, hitazona mandritra ny androm-piainan'ny vokatra.
"Manontania elektrisianina mahay mba hiantohana ny mpampita lalana amin'ny faritra."
Fahadisoana herinaratra Mahita sy mamindra toerana
Tsy maintsy atokana ny famatsiana alohan'ny hanokafana ilay Luminaire. Raha voamarina fa marina ny fifandraisana rehetra dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ireo mpiorina aminy ny tontolon'ny vokatra. Raha izany no izy dia mifandraisa amin'ny mpamatsy anao raha mila soloina sahaza kokoa. Izay fahitana diso rehetra dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny elektrisianina iray mahafeno fepetra ary, raha entina miaraka amin'ny Luminaire eo amin'ny toerany, eo ambanin'ny fahazoan-dàlana hiasa. Amin'ny alàlan'ny fanoloana ny ampahany rehetra dia azo antoka fa voamarina ny tariby sy ny fifandraisana, ary averina misy ny akanjo vita amin'ny tariby.
Teo aloha: Fivoriamben'ny vokatra vita sy vokatra semi-vita
Manaraka: Jiro lehibe amin'ny indostrialy